प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने अरूहरू करोडौँले जस्तै, हामी बाइबलका नियमहरू र आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशस्त अनुग्रहमा आनन्दित हुन्छौं, र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा एकसाथ भेला हुन्छौं, प्रार्थना, प्रशंसा, र सेवा गर्छौं—र प्रभुको हेरचाह र सुरक्षा हामी यी सबै गर्छौं। हामी प्राय कमजोर छौँ, र हामी प्राय बलिया पनि छौँ। हाम्रा सबै कार्यहरू प्रभुका शिक्षाअनुसार छन् भनी हामी विश्‍वास गर्छौं। तब, यो स्पष्ट छकि हामी स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा पुरा गर्ने मार्गमा छौँ भनी हामी आफै पनि विश्‍वास गर्छौं। हामी प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको, उहाँको महिमित अवतरणको, पृथ्वीमा हाम्रा जीवनको अन्त्यको, राज्यको उदयको, र प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिएका सबै थोकहरूका तीव्र इच्छा गर्छौं: प्रभु आइपुग्नुहुन्छ, उहाँले विपत्ति ल्याउनुहुन्छ, उहाँले असललाई इनाम दिनुहुन्छ र दुष्टलाई दण्ड दिनुहुन्छ, र उहाँलाई पछ्याउनेहरू सबैलाई र उहाँलाई बादलमा भेट्न उहाँको दोस्रो आगमन स्वागत गर्नेहरूलाई उहाँले लिनुहुन्छ। जहिले हामी यो विचार गर्छौं, हामी आखिरी दिनहरूमा जन्मियौं र प्रभुको आगमनका साक्षी हुने असल भाग्य पाएकोमा हामी भावुक नभइरहन र कृतज्ञताले पूर्ण नभइरहन सक्दैनौं। हामीले सतावट भोगेका भए पनि, हामीले यसको सट्टामा “अत्याधिक र अनन्त महिमाको काम।” पाएका छौँ। कस्तो आशिष्! प्रभुले दिनुभएका यी सबै तीव्र इच्छा र अनुग्रहले हामीलाई प्रार्थना मा लगातार गम्भीर बनाउँछ र एकसाथ भेला हुनका लागि अझै बढी लगनशील बनाउँछ। सायद अर्को वर्ष, सायद भोली, र मानिसले कल्पना गरेकोभन्दा छोटो समयभित्र, उत्सुकताका साथ उहाँलाई पर्खिरहेका मानिसहरूका समूहका बीचमा उहाँ प्रकट भएर, प्रभु एक्कासि ओर्लनुहुनेछ। प्रभुको प्रकट हेर्नका लागि पहिलो समूहमा हुनका खातिर र उठाइलगिने मध्ये हुन हामी एक अर्कालाई उछिन्न हतार गर्नेछौं, पछाडि छोडिन कोही पनि इच्छुक हुँदैनौं। हामीले यस दिनको आगमनका लागि, लागतको बेवास्ता नगरी सबै थोक दिएका छौँ; कोहीले आफ्ना रोजगारीहरू छोडेका छन्, कोहीले आफ्ना परिवारहरू त्यागेका छन्, कोहीले विवाह त्यागेका छन्, र कोहीले आफ्ना सबै बचतहरूलाई दान गरेका पनि छन्। भक्तिका कस्ता निस्स्वार्थ कार्यहरू! यस्ता इमानदारीता र विश्‍वासयोग्यता अवश्य विगत युगका सन्तहरूका भन्दा पनि अझ परको छ! जसरी प्रभुले आफूले चाहनुभएकाहरूमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र आफूले चाहनुभएकाहरूलाई कृपा देखाउनुहुन्छ, हाम्रा भक्ति र समर्पणका कार्यहरू, हामी विश्‍वास गर्छौं, लामो समयदेखि उहाँका आँखाहरूले हेरेका छन् यसरी नै, हाम्रा निष्कपट प्रार्थनाहरू पनि उहाँका कानहरूमा पुगेका छन्, र हाम्रा समर्पणका लागि प्रभुले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भनी हामी भरोसा गर्छौं। यसबाहेक, परमेश्‍वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँ हामीप्रति दयालु हुनुभएको थियो, र उहाँले हामीलाई दिनुभएका आशिषहरू र प्रतिज्ञाहरूलाई कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। हामी सबैले भविष्यका लागि योजना बनाइरहेका छौँ, र बादलमा प्रभुलाई भेट्न उठाइ लगिनको निम्ति आदानप्रदान गर्ने हाम्रा समर्पण र खर्च काउन्टर चिप्स वा पूँजी बनेको छ। अझ ठूलो कुरा त के छ भने, सारा राष्ट्रहरू र सबै जातिहरूमाथि अध्यक्षता गर्न वा राजाहरूको रूपमा शासन गर्न अलिकति हिचकिचाहटविना, हामीले आफैलाई भविष्यको सिंहासनमा राखेका छौँ। यी सबैलाई हामीले दिइएको रूपमा र अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै थोकको रूपमा लिन्छौं।
प्रभु येशूका विरुद्धमा भएकाहरूलाई हामी घृणा गर्छौं; तिनीहरू सबैका अन्त्य विनाश नै हुनेछ। प्रभु येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास नगर्न कसले तिनीहरूलाई भन्यो? अवश्य पनि, संसारका मानिसहरूप्रति करुणामय हुनुभएका प्रभु येशू लाई अनुकरण गर्ने समयहरू छन्, किनकि तिनीहरूले बुझ्दैनन्, र हामी तिनीहरूप्रति सहनशील र क्षमाशील हुनु ठीक हो। हामीले गर्ने सबै कुराहरू बाइबलका वचनहरू अनुसार हुनुपर्छ, किनकि बाइबल अनुरूप नहुने कुनै पनि कुरा शास्‍त्र-विरोधी वा झूटा शिक्षा हो। यस किसिमको विश्‍वासले हामी प्रत्येकका मनमा गहिरो किसिमले जरा गाडेको छ। हाम्रा प्रभु बाइबलमा हुनुहुन्छ, र यदि हामी बाइबलबाट विचलित भएनौं भने, हामी प्रभुबाट पनि अलग हुनेछैनौं; यदि हामी यस सिद्धान्तमा रह्यौं भने, हामीले मुक्ति पाउनेछौं। हामी एक-अर्कालाई प्रेरणा दिन्छौं, एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्छौं, र हरेक पल्ट हामी एकसाथ भेला हुँदा, हामीले भनेका र गरेका सबै कुराहरू प्रभुको इच्छाअनुसार छन् र प्रभुले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भनी हामी आशा गर्छौं। हाम्रो अत्यन्त प्रतिकूल परिवेश हुँदाहुँदै पनि, हाम्रा हृदयहरू आनन्दले भरिएका छन्। सहज पहुँचमा भएका हाम्रा आशिषहरूलाई हामीले विचार गर्दा, के हामीले पन्छाउन नसक्ने कुनै कुरा छ र? अलग हुनका लागि हामीले सङ्कोच मान्नुपर्ने कुनै कुरा छ र? यी सबै कुराहरू स्पष्ट छन्, र यी सबै कुराहरू परमेश्‍वरका चनाखा आँखा सामु नै छन्। गोबरको थुप्रोबाट उठाइएका खाँचोमा परेका मुठ्ठीभरका हामीहरू, उठाइ लगिने वा, आशिषित हुने, र सबै राज्यहरूमाथि शासन गर्ने गरेको सपना देख्ने, प्रभु येशूका अरू साधारण अनुयायीहरू जस्तै छौँ। हाम्रा भ्रष्टता परमेश्‍वरका दृष्टिमा खुला राखेका छन्, अनि हाम्रा अभिलाषाहरू र लोभहरू परमेश्‍वरका दृष्टिमा दोषी ठहरिएका छन्। तथापि, यी सबै थोकहरू यति सामान्य रूपमा र यति तर्कसंगत किसिमले हुन्छन्, कि हाम्रा तीव्र इच्छाहरू ठीक छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा हामी कोही पनि अचम्ममा पर्दैनौं, हामीले अवलम्बन गरेका सबै थोकको विशुद्धतामाथि शङ्का गर्ने कुरा त परै जाओस्। कसले परमेश्‍वरको इच्छालाई जान्न सक्छ? खास कस्तो किसिमको मार्गमा मानव हिँड्छ, हामीले खोज्न वा अन्वेषण गर्न जान्दैनौं; अनि सोधपूछ गर्नमा पनि हाम्रो चासो झनै कम छ। हामीलाई उठाइ लगिन्छ कि उठाइ लगिँदैन, हामीले आशिष् पाउन सक्छौं कि पाउँदैनौ, स्वर्गको राज्यमा हाम्रा लागि कुनै स्थान छ कि छैन, जीवनको नदीको पानी र जीवनको रूखको फलमा हाम्रो हिस्सा हुन्छ कि छैन भन्ने बारेमा मात्र हामी सरोकार राख्छौं। के यी नै कुराहरू पाउनका खातिर हामीले प्रभुमा विश्‍वास गरेका र उहाँका अनुयायीहरू बनेका होइनौं र? हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, हामीले पश्‍चाताप गरेका छौँ, हामीले दाखमद्यको तीतो कचौरा पिएका छौँ, अनि हामीले हाम्रो क्रूसलाई पीठमाथि राखेका छौँ। हामीले तिरेको मूल्य प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न भनी कसले भन्न सक्छ? हामीले पर्याप्त तेलको तयारी गरेका छैनौं भनी कसले भन्न सक्छ? हामी ती मूर्ख कन्याहरू वा ती त्यागिएकाहरू मध्येका जस्ता हुन चाहँदैनौं। यसका साथसाथै, झूटा ख्रीष्टहरूद्वारा छलमा नपर्नका लागि हामीलाई सुरक्षित राख्न हामीले प्रभुलाई बिन्ती गर्दै, निरन्तर प्रार्थना गर्छौं, किनकि बाइबलमा यसो भनिएको छ: “अनि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई, हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी भन्छ भने विश्‍वास नगर्नू। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् र ठूलठूला चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछन्; ताकि सम्भव भए, तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई नै छल्नेछन्” (मत्ती २४:२३-२४)। हामी सबैले बाइबलका यी पदहरूलाई कण्ठस्थ गरेका छौँ; हामीले तिनीहरूलाई हृदयले चिन्छौं, र हामीले तिनीहरूलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा, जीवनको रूपमा, र हामीले मुक्ति पाउन सक्छौं वा सक्दैनौं वा उठाइ लगिन्छ वा लगिँदैन भनी निर्णय गर्ने श्रेय पत्रका रूपमा हेरेका छौँ …
हजारौँ वर्षदेखि, जीवितहरूले आफ्ना तीव्र चाहनाहरू र आफ्ना सपनाहरू तिनीहरूसँग लिएर बितिसकेका छन्, तर तिनीहरू स्वर्गका राज्यमा गए वा गएनन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि साँच्चिकै थाहा छैन। कुनै समय घटेका सबै कथाहरू बिर्सेर मृतकहरू फर्कन्छन्, अनि तिनीहरूले पितापुर्खाहरूका शिक्षाहरू र मार्गहरूलाई अझै पछ्याएका हुन्छन्। अनि यसरी, वर्षहरू बित्छन् र दिनहरू टर्छन्, हाम्रा प्रभु येशू, हाम्रा परमेश्‍वरले हामीहरूले गरेका सबै कुराहरूलाई साँच्चै स्वीकार गर्नुहुन्छ वा हुँदैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। हामीले गर्न सक्ने कुराचाहिँ परिणामका लागि प्रतीक्षा गर्नु र हुन आउने कुराहरूका बारेमा अनुमान गर्नु मात्र हो। तर पनि हामीकहाँ कहिल्यै देखा नपरी, हामीसित कहिल्यै नबोली नै परमेश्‍वर यस अवधिभरि मौन रहनुभएको छ। अनि यसरी, बाइबललाई पछ्याएर चिन्हहरू अनुसार, हामी परमेश्‍वरका इच्छा र स्वभावका बारेमा स्वेच्छाचारी न्यायहरू बनाउँछौं। परमेश्‍वरका मौनतामा हाम्रो बानी बसेको छ; विचार गर्ने हाम्रा आफ्नै तरिकाद्वारा हाम्रा व्यवहारलाई ठीक र बेठीक भनी मापन गर्ने हाम्रो बानी परेको छ; परमेश्‍वरले हामीबाट माग गर्नुभएका कुराहरूको सट्टामा हाम्रा ज्ञान, धारणाहरू, र नैतिक नीतिहरूमा भर पर्न हामीलाई बानी परेको छ; परमेश्‍वरको अनुग्रहमा आनन्द लिन हामीलाई बानी परेको छ; आवश्यकता पर्दा परमेश्‍वरले हामीलाई प्रदान गर्नुहुने सहायतामा हाम्रो बानी परेको छ; सबै थोकहरूका निम्ति परमेश्‍वरतिर हाम्रा हातहरू फैलाउन र परमेश्‍वरलाई आज्ञा गर्न हामीलाई बानी परेको छ; पवित्र आत्माले कसरी अगुवाइ गर्नुहुन्छ भनी ध्यान नदिई, नियमहरू अनुरूप चल्न हामीलाई बानी परेको छ; अनि अझ बढी त, हाम्रा मालिक हामी आफै भएको समयको हामीलाई बानी परेको छ। हामीले कहिल्यै आमनेसामने नभेटेका यस्तो परमेश्‍वरमा हामी विश्‍वास गर्छौं। उहाँको स्वभाव कस्तो छ, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, उहाँ आउनुहुँदा हामी उहाँलाई चिन्छौं वा चिन्दैनौं, र यस्तै खालका प्रश्नहरू—यिनीहरू कुनै एउटा पनि महत्वपूर्ण छैनन्। उहाँ हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ र हामी सबैले उहाँलाई पर्खेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ, र उहाँ यस्तो वा त्यस्तो हुनुहुन्छ भनी हामीले कल्पना गर्न सक्नु नै पर्याप्त हुन्छ। हामी हाम्रा विश्‍वासको सराहना गर्छौं र हाम्रा आत्मिकतालाई मूल्यवान् ठान्छौं। हामी सबै कुराहरूलाई गोबरको रूपमा हेर्छौं, र सबै थोकहरूलाई पैतालामुनि कुल्चन्छौं। हामी महिमित प्रभुका विश्‍वासीहरू भएका हुनाले, यात्रा जति नै लामो र कठिन भए पनि, कठिनाइहरू र खतराहरू हामीमाथि आइपरे पनि, हामीले प्रभुलाई पछ्याउँदा केही कुराले पनि हाम्रा पाइलाहरूलाई रोक्न सक्दैनन्। “परमेश्‍वर र थुमाको सिंहासनबाट स्फटिक जस्तै जीवनको सफा पानीको विशुद्ध नदी बगी निस्क्यो। त्यो नदीको दुवै किनारामा जीवनको रूख थियो, जसले बाह्र किसिमका फलहरू फलाउथे र हरेक महिना फल दिन्थे: र त्यस रूखका पातहरू जाति-जातिहरूलाई निको पर्नलाई थियो। अनि त्यहाँ उप्रान्त कुनै सराप हुनेछैन: तर यसभित्र परमेश्‍वर र थुमाको सिंहासन हुनेछ; र उहाँका सेवकहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्: अनि तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन्; र तिनीहरूको निधारमा उहाँको नाउँ हुनेछ। त्यहाँ कुनै रात हुनेछैन; र तिनीहरूलाई कुनै बत्ती आवश्यक पर्दैन, न त सूर्यको प्रकाशको नै आवश्यक पर्छ; किनभने परमप्रभु परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई प्रकाश दिनुहुन्छ: र तिनीहरूले सदासर्वदा नै शासन गर्नेछन्” (प्रकाश २२:१-५)। हामीले हरेक पल्ट यी शब्दहरूलाई गाउँदा, हाम्रा हृदयहरू असीम आनन्द र सन्तुष्टिले भरिन्छन्, र हाम्रा आँखाहरूबाट आँसुहरू बग्छन्। हामीलाई छान्नुभएकोमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँको अनुग्रहको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँले यस जीवनमा हामीलाई सय गुणा दिनुभएको छ र आउने संसारमा हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। यदि उहाँले मर्नका लागि अहिले हामीलाई भन्नुभयो भने, हामीले कुनै पनि गुनासोविना त्यसो गर्थ्यौं। हे प्रभु! कृपया चाँडै आउनुहोस्! हामी तपाईंलाई यति उत्कट रूपमा चाहन्छौं र तपाईंका खातिर सबै कुराहरूलाई त्यागेका छौँ भन्ने कुरालाई विचार गर्दै, एक मिनेट, एक सेकेन्ड पनि ढीला नगर्नुहोस्।
हामीले के गर्नुपर्छ भनी हामीलाई अर्ती दिन र उहाँको हृदयमा आवाज दिएर परमेश्‍वरले विभिन्न तरिकाहरू र दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरेर आफ्ना वाणीहरूलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूले जीवन शक्ति बोक्छन्, हामीले हिँड्नुपर्ने मार्ग हामीलाई देखाउँछन्, र सत्यता के हो भनी बुझ्न हामीलाई सक्षम बनाउँछन्। हामी उहाँका वचनहरूद्वारा खिँचिन थाल्छौं, हामी उहाँका बोलाइको सुर र तरिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्छौं, र यस अतुलनीय व्यक्तिका भित्री भावनाहरूमा अवचेतन रूपमा हामी चासो दिन सुरु गर्छौं। हाम्रा पक्षमा काम गर्न उहाँले आफ्नो जीवनधारी रगत बगाउनुहुन्छ, हाम्रो खातिर निद्रा र भोक गुमाउनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति रुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति सुस्केरा हाल्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति शोक गर्नु, हाम्रो गन्तव्य र मुक्तिका खातिर अपमानित हुनुहुन्छ र हाम्रा संवेदन विहीनता र विद्रोहीपनले उहाँको हृदयबाट आँसु र रगत बगाउँछन्। हुने र लिने यो तरीका कुनै साधारण व्यक्तिको हुँदैन, नत कुनै पनि भ्रष्ट मानवजातिले नै यसलाई प्राप्त गर्न वा हासिल गर्न सक्छ। कुनै पनि साधारण व्यक्तिमा नभएको सहनशीलता र धैर्यता उहाँले देखाउनुहुन्छ, र उहाँको प्रेम कुनै सृजिएको प्राणीलाई दिइने कुरा होइन। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हाम्रा विचारहरू जान्दैन, वा हाम्रा प्रकृति र सारलाई स्पष्ट र पूर्ण रूपमा बुझ्दैन, वा मानवजातिको विद्रोह र भ्रष्टता न्याय गर्दैन, वा हामीसँग बोल्दैन र स्वर्गका परमेश्‍वरका पक्षमा यसरी हाम्रा बीचमा काम गर्दैन र बोल्दैन। उहाँले बाहेक अरू कोहीले पनि अख्तियार, बुद्धि, र परमेश्‍वरको गरिमा दिँदैन; परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वरसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तिनीहरूका पूर्णतामा ल्याइन्छ। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई बाटो देखाउन र हामीलाई ज्योतिमा ल्याउन सक्दैन। सृष्टि भएदेखि आजसम्म पनि परमेश्‍वरले प्रकट नगर्नुभएको रहस्यलाई उहाँ बाहेक अरू कसैले प्रकट गर्न सक्दैन। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई शैतानको बन्धनबाट र हाम्रो आफ्नै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्ति दिन सक्दैन। उहाँले परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले परमेश्‍वरको भित्री हृदय, परमेश्‍वरका अर्तीहरू, र सबै मानवजातिमाथि परमेश्‍वरका न्यायका वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले नयाँ युग, नयाँ कालखण्ड सुरु गर्नुभएको छ, र नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी र नयाँ काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ, र उहाँले अस्पष्टतामा लैजाने जीवनलाई अन्त्य गरी हामीमा आशा ल्याउनुभएको छ, र मुक्तिमा लैजाने मार्ग पूर्ण स्पष्टतामा हेर्न हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सक्षम बनाउनुभयो। उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई जित्नुभएको छ र हाम्रा हृदयहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस क्षणपछि, हाम्रा मन चेतनशील भए, र हाम्रा आत्मा पुनर्जीवित भए: यी साधारण, नगण्य व्यक्ति, जो हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ र लामो समयदेखि हामीद्वारा तिरस्कृत हुनुभएको छ—के यो हाम्रा प्रभु येशू नै हुनुहुन्न र, जो जहिले पनि हाम्रा विचारहरूमा हुनुहुन्छ, बिउँझिँदा वा सपनामा हुँदा, र जसलाई हामी रात दिन चाह गर्छौं? यो उहाँ नै हुनुहुन्छ! के यो साँच्चै उहाँ नै हुनुहुन्छ! उहाँ हाम्रा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ! उहाँ सत्य, बाटो, र जीवन हुनुहुन्छ! उहाँले हामीलाई फेरि जिउन र ज्योति देख्न सक्षम बनाउनुभएको छ र हाम्रा हृदयहरूलाई बहकिनबाट रोक्नुभएको छ। हामी परमेश्‍वरका घरमा फर्केका छौँ, हामी उहाँको सिंहासनको सामु फर्केका छौँ, हामी उहाँसँग आमने-सामने छौँ, हामीले उहाँको मुहार देखेका छौँ, र हामीले हाम्रो अगाडिको बाटो देखेका छौँ। यस बेला, उहाँले हाम्रा हृदयलाई पूर्ण रूपमा जित्‍नुभएको छ; उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अब हामी शङ्का गर्दैनौं, उहाँको काम र उहाँका वचनलाई विरोध गर्दैनौं, र हामी उहाँका सामु लम्पसार पर्छौं। हाम्रा पूरै बाँकी जीवनभरि परमेश्‍वरका पाइलाहरू पछ्याउन, उहाँद्वारा सिद्ध पारिन, उहाँको अनुग्रहको ऋण तिर्न, र हाम्रा निम्ति भएको उहाँको प्रेमको ऋण तिर्न गर्न, उहाँको योजनाबद्ध कार्यमा र प्रबन्धमा आज्ञाकारी हुन, र उहाँको काममा साथ दिन, र उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएका कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्‍नुभन्दा अरू हामीले केही कुराको पनि चाहना गर्दैनौं।
जसरी चन्द्रमाले सूर्यलाई अनन्त चक्रमा पछ्याउँछ, यसरी नै परमेश्‍वरको काम कहिल्यै रोकिँदैन, अनि यसलाई तपाईंहरूमाथि, ममाथि, अरूहरूमाथि, र परमेश्‍वरका पाइला पछ्याउनेहरू सबैमाथि र उहाँको न्याय र सजायलाई स्वीकार गर्नेहरूमाथि कार्यान्वयन गरिन्छ।